प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले दुई छिमेकीविच बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्छ - Headline Nepal - Online News Portal from Nepal | Latest Nepal News from politics, sports, entertainment, society, world, technology, opinion, interview, Nepali movies, fashion, life style, tourism, international news, national news, economy, science, music, live news events, live sports events
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणले दुई छिमेकीविच बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्छ
Posted by Milap Subedi | १८ चैत्र २०७४, आईतवार ०९:२६ |
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको मिति तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली चैत २३ गते भारतको राजकीय भ्रमणमा निस्किने छन् । उनी २५ गते नेपाल फर्किने तालिका छ । भारत भ्रमणमा रहँदा ओलीले समकक्षी नरेन्द्र मोदी र भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दसँग भेटवार्ता गर्ने छन् । यस्तै, ओलीले वरिष्ठ केही मन्त्रीहरुसँग पनि भेट गर्ने छन् । ओलीको भारत भ्रमण सद्भावना भ्रमण हुने भनिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नै प्रधानमन्त्रीको यो पटकको भ्रमणमा भारतसँग कुनै माग नराख्ने बताएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण यसअघि भएका असमझदारी र तिक्तता हटाउन केन्द्रीत हुने पनि बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको भारण भ्रमणलाई कसरी लिने हो ? यो भ्रमणमा के कुरा भन्न छुटाउनु हुँदैन ? हामीले यही विषयमा परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग कुरा गरेका छौँ ।
० प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणलाई सद्भावना भ्रमण, सम्बन्ध सुधारको कसी अथवा नेपाल–भारत विकास साझेदारीको महत्वपूर्ण अवसर,, के भन्ने हो ?
–हाँस्दै,, यो तीन वटै हो ।
–नयाँ आयामबाट सम्बन्ध बढाउने अवसर हो नै । सद्भावना भ्रमण पनि हो । सद्भाव कायमै राख्ने हो । विग्रेको सम्बन्ध सूधार गर्ने हो । नाकाबन्दी असफल भएपछि भारत पनि चेताएको छ । टेढिएर हुँदैन भन्ने उसले पनि बुझेको छ । नयाँ सिराबाट सम्बन्ध सुधार्न खोजेको छ । त्यसलाई नेपालले पनि स्वागतै गरेको छ । अर्को कुरा तपाईले भनेको जस्तो सम्वृद्धिका लागि अहिले नयाँ चरणबाट कुरा गर्नु आवश्यक छ । किन भने नेपाली जनताले आशा गरेको सम्वृद्धि ने हो । कसरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने र कसरी यहाँको कनेक्टिभिटी भारतसँग पनि बढाउने ?, कसरी व्यापार घाटालाई कम गर्ने ? भन्ने उपाय खोज्ने । जलविद्युतमा एकतर्फी फाइदा मात्रै होइन दोहोरो फाइदा कसरी हुन्छ ? भन्ने विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । प्राकृतिक स्रोतमा दोहोरो हितको सन्तुलन कायम गर्ने हो । बंगलादेशलाई पनि ट्रान्समिसन लाइन बनाएर विद्युत पठाउने । ट्रान्समिसन लाइनको कुरा मात्रै होइन भारत नेपालमा चाँडै रेल ल्याउन चाहन्छ । त्यसैले आगामी सम्वृद्धिका लागि भारत लगायतका छिमेकीहरुसँग विकासमा साझेदारी आवश्यक छ । त्यसको खाका तयार गरेर अगाडि बढ्ने ग्राउण्ड तयार गर्ने भ्रमण हुनेछ यो ।
० चीनबाट पहिलो भ्रमण हुन्छ कि, भारतबाट भन्ने सर्वत्र चाँसो थियो । अन्ततः भारतबाटै प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण सुरु हुने भो, यो पल्ट भारतबाटै अलिक बढी बोलावट भएको हो ?
–पहिलो बधाई दिने पनि भारतै भयो । प्रधानमन्त्रीले सपथ ग्रहण नगर्दै विदेशीमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई पठाएर सद्भावनाको आधार तयार गर्ने काम पनि भारतबाटै भयो । भारतबाटै बढी बोलावट भयो भन्न सकिन्छ र नेपालको प्रधानमन्त्रीले पनि भारतको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर जानु स्वभाविकै हो । तर, भारतले नै बोलाएको भनेर हस्याङफस्याङ गर्दै जाने होइन, पूरा तयारीले जानु पर्छ ।
० ओलीका लागि यो शुभ संकेत हो ?
–शुभ संकेत हो नि । किन भन्दा,, अहिले दुवै छिमेकीहरु प्राथमिकतामा छ । दुवै प्राथमिकतामा छ भन्ने शुभ संकेत पनि हो । छिमेकी नजिकको भएपछि समस्या पनि अनेक हुन्छ । तर, त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ भनेर उच्चस्तरमै कुरा हुन लागेको हो । हिजोको जस्तो कर्मचारीतन्त्रको भर पर्ने होइन, कि अब राजनीतिक तहबाटै सम्बन्ध बढाउन भारत सकारात्मक देखिन्छ । यो ओलीका लागि शुभ संकेत नै हो ।
० अब उसो भए, दुबै तर्फ बराबर हैसियतमा र त्यो पनि उच्च तहमा सम्बन्धबारे कुरा हुन्छ ?
–गर्नु पर्ने नै त्यही हो । कर्मचारीतन्त्रले भएको समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्ने हो । विशेष गरी सानालाई हेप्ने र ठूलाको चाकडी गर्ने भारतीय कर्मचारीतन्त्र अब सम्बन्ध विस्तारमा फेल भइसक्यो । अब समान हैसितमा समान मुलुकबीचको सम्बन्ध भन्नु पर्दछ । त्यसैले राम्रो सम्बन्ध बनाउनु पर्छ । त्यो राम्रो सम्बन्ध भनेको समानतामा आधारित हुनु पर्दछ ।
० यही भ्रमणबाटै हामी अब उच्च तहसँग सोझै आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने भयौँ ?
–अवश्य । अहिलेको भेटघाट उच्च तहमै राखिएको छ । अन्य तहमा पनि भेट हुन्छ । तर, पहिले उच्च तहमा हुने भनिएको छ । भ्रमणको थोरै समय छ, तर राजकीय सम्मानसाथ हुँदैछ । यो राजकीय भ्रमण हो । यसले दुई छिमेकीको बीचमा नयाँ सम्बन्धको आधारशीला खडा गर्ने छ । र, मोदी जीको पनि अब कार्यकाल सकिने बेला हुँदैछ । त्यसैले उहाँ सम्बन्धकाबारे पूरै समीक्षा गरेर अब के आवश्यक छ भन्ने कुरामा जानकार हुनुहुन्छ । अब राजनीतिक तहबाटै कुरा गर्ने अभ्यासको सुरुवात हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो ।
० ओली भारत जानुअघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नेपाल आइदिनु भयो । यो विषयमा भारतले कुरा झिक्ला नझिक्ला त्यो एउटा कुरा भो । यो भ्रमणमा नेपालले राख्नुपर्ने विषय के हुन् ?
–हामीले राख्नु पर्ने त, असल छिमेकी सम्बन्ध बढाउनलाई अहिलेसम्मका सोंचमा सुधार हुनुपर्दछ । त्यो दोहोरो । एकले अर्कोलाई सम्मान गर्ने । अर्को तपाईले पाकिस्तानको कुरा उठाइहाल्नु भो । छिमेकी भन्नाले पहिले भारत विशेष भन्ने गरिन्थ्यो । त्यो अध्याय समाप्त भयो । अहिले चीन पनि सक्रिय भएर आउन थाल्यो । पाकिस्तान समेत हामी छिमेकी हौँ भने, यही बधाई दिन आयो । बंगलादेशले हाम्रो जलिविद्युतमा लगानी गर्न खोजिरहेको छ । बंगलादेश नेपालको विजुली लैजान चाहन्छ । नेपालसँगको समबन्ध बढाउन भनि छिमेकीहरु प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा आएका छन् । अन्य शक्ति राष्ट्रहरुको पनि सक्रियता बढेको छ । त्यसैले हामीले सम्वृद्धिको बाटो समात्न धेरैतिरको सहायताको आवश्यकता रहन्छ ।
मल्टिनेशन्सहरुलाई नेपालको लगानीको आह्वान गर्न सकिन्छ । त्यो सरकारको दायित्व हो । नभए विकास हुँदैन । हिजो खुब आयात भयो र भन्सारका पैसा बढ्यो भनेर दंग हुने गरिन्थ्यो । अब त्यसो गर्नु भएन । निर्यात गरेर हाम्रो अन्तशुल्क बढाउनु पर्दछ । परआश्रित अर्थतन्त्रलाई अन्तरनिर्भरताको अर्थतन्त्रमा परिणत गर्ने दायित्व छ । हिजो आयात बढी थियो, अब निर्यातलाई बढाउनु पर्छ । उद्योगहरु बढाउनु पर्छ । हरेक गाउँपालिकाको वडालाई प्रशासनिक र राजनीतिक ईकाई मात्रै होइन, विकास पनि हो भनेर ती ठाउँहरुमा एउटा न एउटा निर्यात वस्तु उत्पादन गर्नै पर्छ । भारत र चीनबाट आउने रेल उताबाट भरिएर आउने र यताबाट खाली जाने अवस्था नहोस् भन्ने हो । त्यसैले त्यो तहमा कुरा हुनुपर्दछ । दुईटा निकै ठूलो जनसंख्या भएका मुलुक छन् । त्यहाँ यहाँको अन्न, फलफुल र माछा, मासु जति पठाएपनि हुन्छ । त्यो हैसित राख्नु पर्छ । निर्यात सहज पार्नु पर्छ ।
० चीनले नेपालका विभिन्न आयोजनामा चासो राखिरहेको छ । यतिसम्म कि क्रस बोर्डर लाइनसम्मको कुरा गरिरहेको छ । यो अवस्थामा भारतसँग के एजेण्डा राख्ने हो ?
–बालुवाबाट त तेल आउँदैन नि । तेल निकाल्न त तोरी नै चाहिन्छ । कृषिमा बढावा दिने कुरा गर्न सकिन्छ । यो पल्ट भारतको बजेट हेर्ने हो भने आधा भन्दा बढी कृषि मै खन्याइएको छ । जनसंख्या बढी कृषिमा आधारित भएको हुनाले कृषिलाई आनुनिकीकरण गर्ने, विविधिकरण गर्ने, यान्त्रिक प्रयोग बढाउने र सिंचाइलाई नयाँ ढंगले विस्तार गरेर उत्पादन बढाउने कुरामा साझेदारी गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकता हो । पर्यटन अर्को महत्वपूर्ण हो । दुवै देशको ठूलो जनसंख्या घुम्न चाहन्छ । दुवैतिरका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ । पर्यटन क्षेत्रले व्यापार घाटा घटाउन पनि मद्दत गर्छ । मूख्य कुरा भारतको सहयोग हामीलाई किन चाहियो भने ? हाम्रो व्यापार घाटा घटाउनलाई । अलिकति नेपालीले उत्पादन गर्न थाल्यो भने भारतले निर्यातमा बाधा गरिहाल्ने समस्या छ । व्यापारी र कर्मचारीतन्त्रको असहयोग नीतिलाई हटाएर भारतीय बजारमा नेपालको उत्पादन विना अबरोध पुग्ने अवस्था सिर्जना गर्नु पर्दछ । त्यो व्यवस्था दीर्घकालका लागि गर्ने पहल गर्नु पर्दछ ।
० अहिले नाकामा देखिएको समस्या र व्यापार घाटाबारे पक्का कुरा हुन्छ भन्ने विश्वास लिने हो ?
– हुन्छ । त्यो गर्नै पर्छ । दुबै छिमेकी उन्नति गर्ने अनि हामी मात्रै अविकसित भएर बस्ने भन्ने त हुँदैन नि । त्यो मिल्दै मिल्दैन । अबै त दुबैको सम्वृद्धिबाट लाभ उठाएर आफै पनि प्रस्ताव राख्न जाने हैसित बनाउनु पर्छ । सबै अस्थिरता हटेको छ । स्थिर सरकार आएको छ । सामान्य होइन तीब्र गतिमा विकासमा जान छिमेकीको साथ सहयोग, सफलता, लगानी सबैमा जानु पर्दछ । यो पटकको भारत भ्रमणमा पनि सम्वृद्धिका लागि आर्थिक एजेण्डा राख्नु पर्दछ ।
० सार्कबारे कुरा गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
–यो त नगरी नहुने हो । नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । अस्ति पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री आएको मूख्य उद्देश्य नै त्यही हो । सार्कलाई सक्रिय बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । जीत–जीतको सम्बन्ध एउटा कुरा हो भने, सबै राष्ट्र समान हुन भन्ने अर्को कुरा हो । सार्कमा भएका सबै मुलुक सार्वभौम समान हुन् । यो औपनिवेशिक नीतिकाविरुद्ध समानताको आधारमा सबैको क्षेत्रीय स्वार्थ हेर्ने हो । त्यसैले सार्क जोगाउँ भनेर कुरा गर्नु पर्छ ।
Previousश्वेतपत्रमाथि टिप्पणीः निजीकरणको फेरि छानविन गराैं
Nextडीपीएल क्रिकेटमा सिवाईसी अत्तरियाको सानदार जित
एउटा दासको घोषणा-पत्र
९ असार २०७५, शनिबार १३:२१
१० मंसिर २०७५, सोमबार १८:२०